ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ
ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များရှာဖွေနေ? ထို့နောက်အပေါ်ကိုဖတ်ရှု! ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင်အရေးပါသောရွေးချယ်မှုသိ. ဒါပေါ့, တဦးတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ရာတစျခုသို့တက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်တဲ့အခါတက္ကသိုလ်ကမ်းလှမ်းသောသင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူမှုအဆောက်အယူရမယ်. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံတစ်အူခံစားမှုလည်းပေါ်သွားကြဖို့ကောင်းလှ၏. ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤသုတေသနအချို့ပြုသောအမှုနှင့်အများစာရင်းကိုပြုစုခဲ့ကြ အများစုမှာအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားခြင်း အံ့မခန်းဗိသုကာ. တချို့ကတစ်ခုရှိ အံ့သြဖွယ်သမိုင်း, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအသစ်ထူထောင်တက္ကသိုလ်များအချို့လည်းဒီ list အပေါ် featured နေကြတယ်. သူတို့ကခေတ်မီအဆောက်အဦးများနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုသောခေတ်ပြိုင်ဗေဒပူဇော်နှင့် အနုပညာ features တွေ. ကျွန်တော်တို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးဘာသိပါစေ!
Bologna တက္ကသိုလ်, အီတလီ
အဆိုပါ Bologna တက္ကသိုလ် တွင် အီတလီ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်အဖြစ်မှတ်နေသည်, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခံတော်မူပြီးမှ 1088. ဤစာရင်းတွင်၏ဖြစ်ပါသည် ဥရောပတိုက်တွင်အများစုမှာအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ, ဒါပေမဲ့ဒီစဉ်းစားနိုင် ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်တွေထဲကတစ်ခု. အဆိုပါ Palazzo Poggi အောက်ပုံ, တက္ကသိုလ်၏အဓိကအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခု. ဒါဟာတက္ကသိုလ်ရဲ့သုံးရတာဟာ ပြတိုက် သဘာဝအလျောက်သမိုင်းအပေါ်ပြပွဲနှင့်အတူ, ကာယဗေဒ, သားဖွား, ရူပေဗဒ, နှင့်ဓာတုဗေဒ. ဟုတ်ကဲ့, သင်ညာဘက်ကိုဖတ်ရှု. သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက်ရှိ!
ယင်းအထဲကကိုဆန်းစစ်သောအခါမူကားသူတို့သည်သင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအဆောက်အဦးများမဟုတ်ကြ အများစုမှာအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ. သင်တို့အပေါ်မှာထားသင့်ကြောင်းတက္ကသိုလ်အတွင်းအများအပြားအဆောက်အအုံများရှိပါတယ် သင့်ရဲ့မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးစာရင်း. ဤရွေ့ကားစပိန်၏ကောလိပ်တို့ပါဝင်သည်, ပန်းရောင်, cloistered အဆောက်အဦးက၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးလုံး Gothic အဘိဓါန်များနှင့် Renaissance element တွေကိုထည့်သွင်း. အဖြစ်လက်ရာမြောက်သောဗိသုကာ, တက္ကသိုလ် 2-ဟက်တာရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်နေရာဖြစ်သည်.
ရထားဖြင့်ရှိပါတယ် Get လုပ်နည်း?
၎င်း၏ဗဟိုတည်နေရာနဲ့ပထဝီကြောင့်, Bologna ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ ၏တဦးတည်းသို့ အဓိကရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး ၏အချက်အချာ မြောက်ပိုင်းအီတလီ. ဒါဟာအလွန်ကိုအခြားအဓိကအီတလီစင်တာများနှင့်အတူကောင်းစွာ-connected ဖြစ်ပါတယ်.
Bologna ဖြစ်ပါသည် 37 Florence ကနေမိနစ်
2-နာရီ 20 မိနစ်ကနေ ရောမမြို့
2 နာရီကနေ ဗင်းနစ်
1 Ferrara ကနေနာရီ
တစ်ဦးက ခေတ်မီမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတွင်းမီလန်သို့ရောက်ရှိခွင့်ပြု 65 မိနစ်များ.
ဒီမျဉ်း၏အခြားဌာနခှဲကရောမမြို့နှင့်အတူ Bologna ချိတ်ဆက်.
ဘေးထွက်မှတ်စု: အဆိုပါယူပြီးနေစဉ် မီလန်ကနေရထားတောင်ဘက်, တောင်ဘက်တွင် Bologna အထက်တွင်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် Duomo တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းဖမ်းရန်မမေ့မလြော့ပါ. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် နေဝင်ချိန်မှာအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့.
Rostock တက္ကသိုလ်, ဂျာမနီ
အဆိုပါ Rostock တက္ကသိုလ် ဘောလ်တစ်ပင်လယ်တွင်ဒေသကြီးအတွင်းရှိအသက်အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်သာဖြစ်ပါသည်; ဒါကြောင့်လည်းအစဉ်အလာထဲမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်. နှင့်သင်တန်း, ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ၏တဦးတည်း. အထဲတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း 1419, ဒါကြောင့်မကြာမီယင်း၏ 600th နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာပညာပေး၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာအပေါ်ကိုပြန်ကြည့်ရှုမည် ကျောင်းသားများအတွက် နှင့်သုတေသနလုပ်နေ. အဆိုပါအဘိဓါန် Gothic- style အမျိုးမျိုးအဆောက်အဦးများ, သစ်ပင်-စီတန်းနည်းလမ်းနှင့်အတူ coupled နှင့် ပန်းခြံများ တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် setting ကိုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ. တက္ကသိုလ်၏ဗဟိုမှာဤဖြည့်စွက်ဖို့အစပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်သောမျက်စိ-ဖမ်းအဓိကအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ အများစုမှာအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ပန်းခြံများနှင့်စမ်းရေတွင်း၌ဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိပြီး, ကျောင်းသားများနှင့်ဧည့်သည်များအတွက်တွေရဲ့ရန်အချို့သောအချိန်ဖြုန်းရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံအစက်အပြောက် အဆောက်အဦး၏ကြွယ်ဝသောအပြင်ပန်း.
Rostock တက္ကသိုလ်ကိုးခုရိုးရာမဟာဌာနပါဝင်ပါသည်အပေါင်းတို့နှင့်မဟာဌာနထံမှသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ကျောင်းသားများကိုလေးယောက်အဓိကနယ်ပယ်များတွင်သုတေသနလုပ်ဖို့ပူးပေါင်းထားတဲ့အတွက်တဦးတည်းအလယ်ပိုင်း interdisciplinary ဒြေ:
အသက်, အလင်း, နှင့်ကိစ္စ
အသိပညာ – ယဉျကြေးမှု – ေူပာင်းလဲရေးကို
Rostock တက္ကသိုလ်ဘာသာရပ်များတစ်ဦးကအလွန်ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူဂျာမန်တက္ကသိုလ်များတစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာထက်ပိုမိုကမ်းလှမ်း 100 သင်တန်းများ: 34 နှင့်အတူပြီးအောင် လူပျို, 56 မာစတာဘွဲ့နှင့်အတူ, 37 (ဆရာ, ဆရာမမြားအပါအဝငျ) တစ်ပြည်နယ်စာမေးပွဲနှင့်3တစ် Ph.D နှင့်အတူ. ထို့အပွငျ, ဆရာသင်တန်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနဗဟိုဌာနမသာမပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ဆောင်သွားရန်ဒါပေမယ့်လည်းဆရာမသင်တန်း၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်းအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်.
၏တဦးတည်းရပုံကိုသိခငျြ ဥရောပမှာတော့အများစုမှာအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ? သင်ဘယ်ဟာကိုဦးတည်ချက် ခရီးသွားလာ မှ (e.g. Rostock သို့မဟုတ် Schwerin, ဘာလင်သို့မဟုတ်ဟမ်းဘတ်), ရထားယူ သငျသညျ Wismar ဘူတာရုံရောက်ရှိသည်အထိ. ဒီကနေ, သင်လုပ်နိုင်သည် ဘတ်စ်ကားဖမ်း လိုင်းများကို အသုံးပြု. ဂျေ- R. -ယေရိမုတ်-Strasse အတွက်ဘတ်စ်ကား-stop မှ4သို့မဟုတ်, G (Ostseeblick ဆီသို့ဦးတည်) သို့မဟုတ် B-D ကို (Seebad Wendorf ဆီသို့ဦးတည်). ဒါဟာဖြတ်ပြီးဒီဘတ်စ်ကား-stop ထံမှသာတတစ်မိနစ်လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါသည် ကားတစ်စီးပန်းခြံ အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ်မှ.
(မြို့ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများ၏ကွန်ယက်အစီအစဉ်, အချိန်ဇယားနှင့်စျေးနှုန်းများ, အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီး Wismar ၏ Hanseatic မြို့က်ဘ်ဆိုက်.
ဘာလင် Rostock မှရထား
ဟမ်းဘတ် Rostock မှရထား
Schwerin Rostock မှရထား
Wismar Rostock မှရထား
Aarhus တက္ကသိုလ်မှ, ဒိန်းမတ်ဥရောပမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ Is
Aarhus တက္ကသိုလ်မှ ဒိန်းမတ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တွင်တည်ရှိသည်နှင့်၎င်း၏အစိမ်းရောင်ကျောင်းဝင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်, နှင့်အတူပြည့်စုံ တစ်အိုင်. အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုဘယ်လိုလူလုပ်အဆောက်အဦများ၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စုံလင်သောအညီအလုပ်လုပ်နိုင်. အဓိကအဆောက်အဦများကသရုပ်ပြ, ဿုံ. အဆိုပါအဆောက်အဦးအတော်များများဟာဒိန်းမတ်ဗိသုကာပညာရှင်တို့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ C.F. တက္ကသိုလ်ရဲ့လူငယ်ထင်ဟပ်စေတဲ့မော်ဒန်ဒီဇိုင်း Moller. Moller နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကေး Fisker နှင့် Povl Stegmann အဝါရောင်-အုတ်အဆောက်အဦများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ကြ. သူတို့တက္ကသိုလ်မှထူးခြားသောအဖြစ်ကွဲပြားကြသည်. အဓိကအဆောက်အဦးကတည်းကတဦးအဖြစ်ယူဆထားသည် 12 ဒိန်းမတ်သမိုင်း၌အထင်ရှားဆုံးဗိသုကာအကျင့်ကိုကျင့်. ကအများစုကတဦးသည်အများအပြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ အံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ.
ကျော်နှင့်အတူ 44,000 ကျောင်းသားများအတွက်, ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး. ဒါဟာဝိဇ္ဇာလေးစှမျး၏ပါဝင်သည်, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ကျန်းမာရေး, နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့်လူမှုသိပ္ပံ.
တကမ္ဘာလုံး Oriental, တက္ကသိုလ်ကျော်နှင့်အတူအရပျ၌ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်များရှိပါတယ် 50 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအဖွဲ့အစည်းများ. ဤသည်အာတိတ်တက္ကသိုလ်လည်းပါဝင်သည်, အဆိုပါ Utrecht ကွန်ယက်, the Nordic Centre Fudan and the Nordic Centre India.
Aarhus ဒိန်းမတ်အတွက်အရေးအပါဆုံးမီးရထားလမ်းဆုံတစျခုမှာတည်ရှိသည်. မြောက်ဘက်မှအလုပ်ချိန်နာရီထွက်ခွာရှိပါတယ်, တောင်, နှင့်အနောက်. တောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဥရောပကနေ, ဆက်သွယ်မှုဟမ်းဘတ် / Flensburg မှတဆင့်ရှိပါတယ်. ဟမ်းဘတ်ထံမှ Aarhus ဖို့အချိန်ခရီးသွားခြင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငါးနာရီ. အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများမှပိုလန်နှင့်ကိုပင်ဟေဂင်ကနေတဆင့်သွားပါ Aarhus မှဆက်သွယ်မှုများကိုလေ့ကျင့်. Aarhus ကိုပင်ဟေဂင်နှင့်ထံမှအလုပ်ချိန်နာရီန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်. ၏အဖွင့် အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း မဟာအောက်မှာခါးပတ်ဟာတာရှည်ထားပြီး ခရီးသွားခြင်း တစ်နာရီအားဖြင့်. ခရီး ယခုသုံးနှစ်ခွဲနာရီကြာ. ဆွီဒင်မှအများအပြားနေ့စဉ်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်, ဂျာမနီ နှင့်ဥရောပ၏ကျန်.
Aarhus ဘူတာရုံဘို့ချည်နှောင်လျက်ရထားအလုပ်ချိန်နာရီကိုပင်ဟေဂင်လေဆိပ်စွန့်ခွာ. စျေးနှုန်း DKK အကြောင်း 410 တစ်လမ်းလက်မှတ်များအတွက် (ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထားအပါအဝင်).
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? ပူနွေးသောရာသီဥတုကြာနေချိန်တွင်ယခုရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်, ၏အကူအညီနှင့်အတူ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spectacular-universities-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဥရောပမှာတော့ Coradia iLint အနိမျ့-မြင်းစီးရထား
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
အနောက်ဥရောပအားဖြင့်ရထားခုနှစ်တွင်များအတွက်သိကောင်းစရာများ2ရက်သတ္တပတ်
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား